बाथरूम नवीकरण सावधान योजना र सही गणना आवश्यक छ। प्रकार र उपकरण र फर्नीचर को स्थान प्रक्रिया मा बदलाव जोगिन, पानी, बिजुली ताराहरु को उपयुक्त संचार आपूर्ति र छुट्टी प्रशस्त गर्न, मालिकको संग सहमत हुनुपर्छ।
प्लम्बर खरीद, मापदण्ड को एक नम्बर खातामा लिन: कार्यक्षमता, विश्वसनीयता र डिजाइन। सुविधाजनक स्थित र ठीक आकार, आकार, रंग मा सज्जित र समारोह डिजाइन सान्त्वना र प्रयोग मा सजिलो सुनिश्चित गर्दछ।
विशेष ध्यान व्यक्तिगत स्वच्छता (bidet, स्वच्छ शवर) को लागि पाइपलाइन उपकरण को विकल्प भुक्तान छ।
निःशुल्क योजना संग निजी घरहरू र अपार्टमेन्ट को मालिक कोठा को आकार चयन र सबै आवश्यक उपकरण राख्न सक्नुहुन्छ। थप व्यापक सानो आकारको आवास स्थान सुरक्षित गर्न, यो सट्टा एक सेनेटरी शवर शौचालय bidet स्थापना गर्न उचित छ, त्यसैले सानो स्पेस मा उपकरणहरू र साधन को विकल्प मा मालिकहरूको क्षमता सीमित। को प्रक्रिया साथै व्यक्तिगत स्वच्छता को, यन्त्र, टाइल्स शौचालय धुन प्रयोग गर्न सकिन्छ।
डिजाइन एक shutoff वाल्व संग सुसज्जित छ ह्यान्डल जो हजारी, संग स्वच्छ शवर नली छ। एक लचिलो नली एक पानी को स्रोत जोडिएको।
भेद पानी आपूर्ति गर्न जडान बताइरहेका द्वारा स्वतन्त्र र संयुक्त डिजाइन।
यो स्वतन्त्र प्राण मानक व्यास लचिलो नली छुट्टै मिक्सर जोडिएको। आगमन पानी तापमान समायोजन कम लागत, - जडान यस प्रकारको को फाइदा। यो बेफाइदा - प्रणाली मा दबाव ड्रप, को स्थापना नियन्त्रण गर्न नसक्नुको थप उपकरण एक सीमित ठाउँ मा। स्वतन्त्र स्वच्छ शवर मा अलग शौचालय प्रयोग गर्न सुविधाजनक छ शौचालय संग बाथरूम शायद प्रयोग गरिन्छ।
दोस्रो विकल्प - थर्मोस्टेट एक स्वतन्त्र प्राण जडान छैन। जब एक पर्खाल वा बाहिरी पानी तापमान लगातार थर्मोस्टेट सेट निर्माण प्रयोग गरेर। लाभ - निरन्तर तापमान, प्रणाली मा दबाव मतभेद बिना। जडान स्वच्छ शवर यस प्रकारको को बेफाइदा - थप कोठा वा ठाउँ आवश्यकतालाई। यस पाइपलाइन बक्समा वा चिलमची अन्तर्गत मन्त्री मा थर्मोस्टेट माउन्ट सुविधाजनक।
चिलमची संग स्वच्छ शवर - केही निर्माता एक लागत प्रभावी विकल्प प्रस्ताव। निम्नानुसार एक लचिलो नली मिक्सर सीधै जोडिएको छ।
पानी तापमान, मिक्सर ट्याप नियन्त्रण गरिन्छ साँचाहरू शवर ह्यान्डल गर्ने बन्द-बन्द वाल्व खोल्छ थिचेर, पानी टुकी मार्फत बग्छ।
लचिलो नली को निकासी लागि जडान को यो विधि पनि प्लास्टिक पाइप को निर्मित प्रणाली आवश्यक व्यास बढाएर कुनै पनि उपयुक्त स्थान बाथरूम मा गर्न सकिन्छ।
रंग, माल र विविध डिजाइन को एक विस्तृत विकल्प स्वच्छता प्रक्रियाहरु लागि उपयुक्त शैली सामान र उपकरण चयन गर्न अनुमति दिन्छ।
मूल्यहरु, प्रकार, विशेषताहरु: बाथरूम मा निकास लागि प्रशंसक। बाथरूम को लागि एक प्रशंसक कसरी चयन गर्न
जर्मन इस्पात बाथटब Kaldewei। इस्पात स्नान Kaldewei, समीक्षा को सीमा
र कसरी Crimea मा आराम गर्न कहाँ राम्रो?
दबाइ गर्भावस्था को समयमा "Angiovit"
50 वर्ष Jubilee। एक छुट्टी कसरी व्यवस्थित गर्ने?
स्क्रिन समेट्छ। स्क्रिन स्पेस द्रुत परिवर्तन को लागि कवर
कन्सोल आज्ञा सीएस: प्रशिक्षण र आफ्नो भूमिका लागि जाने
यो महिला केही वर्ष उनको उमेर पुऱ्याउन कि "फेंक" गर्न सक्नुहुन्छ बाहिर जान्छ!
पाठ्यक्रम सुरु पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री: rennet